ပင်မစာမျက်နှာ » ထုတ်ကုန်များ » ဖုန်မှုန့် Filter ကို
pleated filter အိတ်များနှင့်စစ်ထုတ်သည့်အရာ
description:filter အိတ်သန့်ရှင်းရေးကိုစတင်ရန်ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကိုပြောင်းပြန်လုပ်သည်။ ပြောင်းပြန်လေသန့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင်အိတ်များ၏စုစုပေါင်းပြိုကျမှုကိုကာကွယ်ရန်အပြန့်ကျဲထားသည့်ကွင်းများကိုအိတ်၏အပြင်ဘက်တွင် ၃ မှ ၄ ပေကြားခွဲထားသည်။ စစ်ထုတ်သည့်အိတ်များကိုတစ်ချိန်တည်းတွင် off-line စနစ်ဖြင့်အခန်းတစ်ခန်းစီသန့်ရှင်းသည်။
description:၁။ အဓိကထုတ်ကုန်များ - အလတ်စား alkaline နှင့် alkaline free glass fiber filter filter (အိတ်) အမျိုးအစားနှစ်မျိုး။
description:Polyester အိတ်စစ်ထုတ်စက်များ Breaking Elongation သည် MD အတွက် ၂၀% အောက်နှင့် CMD အတွက် 20%၊ ခြောက်သွေ့မှုနည်းသောအနိမ့်သည် 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ပစ္စည်းသည်အခြားပစ္စည်းများထက်စျေးသက်သာသောကြောင့်အိတ်အိမ်စနစ်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
Basalt filter ကိုအိတ်
description:အရွယ်အစား - အချင်း 100mm, 125mm, 130mm, 150mm, 180mm, 250mm etc ။
description:1. စစ်ဆင်ရေးအပူချိန် 150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်,
Polypropylene filter ကိုအိတ်
description:Polypropylene filter အတွက်အပြီးသတ်ကုသမှု: singed, calendered, heat set, stainless steel ground wire (anti-stat)
filter အိတ်၏အရွယ်အစား - အချင်းအိတ် filter filter အရှည် 100mm, 125mm, 130mm, 150mm, 180mm, 250mm ect ။
မဆိုအရှည် filter ကိုအိတ်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
စစ်ထုတ်ခြင်းအိတ်လုပ်ငန်းစဉ်နည်းလမ်း - အပ်ချုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂဟေဆော်ခြင်း
acrylic filter ကိုအိတ်
description:acrylic အပ်အပ်အမှုန့်အိတ်အိတ်ဓာတုဗေဒအမည်မှာ polyacrylonitrile ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအပ်ဖြင့်တရားဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်အထူးရေစိုခံသောပြုပြင်ထားသော acrylic အလတ်စားအပူချိန်မှတစ်ဆင့် hydrolysis resistance needled filter filter ကိုရရှိသည်။ ရှူရှိုက်နိုင်သော 14 m3 / m2၊ ပမာဏ min၊ ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန် - ၁၆၀ ℃၊ ၁၄၀ ℃ပုံမှန်အလုပ်။ အ ၀ တ်အထည်များသည်ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်အားဖြည့်ပေးသောကြောင့် acrylic စက်ယက်လုပ်စဉ်တွင်အပ်ချည်ကိုအသုံးပြုထားသည်။
Aramid filter ကိုအိတ်
အလုပ်လုပ်အပူ: 204 ဒီဂရီ
အများဆုံးအပူချိန်: 240 ဒီဂရီ
Excellent က alkali ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
ကောင်းသော hydrolysis တည်ငြိမ်မှု
PPS filter အိတ်
description:အရွယ်အစား: အချင်း 100mm, 125mm, 130mm, 150mm, 180mm, 250mm ECT ။
P84 filter အိတ်
3. အလုပ်လုပ်တဲ့အပူချိန်: 240 ဒီဂရီ
4.Max အပူချိန်: 260 ဒီဂရီ
P84 အမျှင်သည် cross section ဖွဲ့စည်းပုံ (အရွက်ပုံသဏ္)ာန်) နှင့်အတူရှိပြီးကြီးမားသော filtration andရိယာနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ filtering ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။
PTFE filter ကိုအိတ်
description:PTFE ဆေးထိုးအပ်ကို Teflon ဟုလည်းခေါ်သည်။ အပူချိန် ၂၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ရှိ၍ ချက်ချင်းအပူချိန် ၂၈၀ စင်တီဂရိတ်အထိရှိသည်။ PTFE သည်အထူးပစ္စည်းဖြစ်ပြီး Alkali နှင့်အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ Anti-hydrolysis၊ တည်ငြိမ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်၊ အဓိကအားဖြင့်ကျောက်မီးသွေးလောင်ကျွမ်းသောဘွိုင်လာ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမီးရှို့ခြင်း၊ ကာဗွန်အနက်ရောင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်အချို့သောတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးအရည် filtration ။
ဖန်မျှင်ထည် filter ကိုအိတ်
description:ဖန်မျှင်ထည်စစ်ထုတ်သည့်အထည်ကိုဖိုက်ဘာမှန်ချည်မျှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်အက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အခြားဓာတုဗေဒဆိုင်ရာကုသမှုများအတွက်ဖိုက်တာ၊ ဆီလီကွန်၊ စက်မှုဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေး,ရိယာ၊ အိတ်အိမ်၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့်အဖိုးတန်ဖုန်မှုန့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတို့တွင်ဖိုက်ဘာမှန်စစ်အိတ်များကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြသည်။
description:Fms needle ထိုးနှက်ထားသောခံစားမှုသည် Fiberglass ၏ပစ္စည်းများနှင့် aramid သို့မဟုတ် pps နှင့်အခြား p84 fiber ကဲ့သို့ကြိုးနှင့်အတူမြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်အတူဖုန်မှုန့်စစ်ထုတ်ခြင်းတွင်အလွန်ပြီးပြည့်စုံသော filter media များဖြစ်လာသည်။
PTFE filter ကိုအထည်
description:PTFE ဆေးထိုးအပ်ကို Teflon ဟုလည်းခေါ်သည်။ အပူချိန် ၂၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ရှိ၍ ချက်ချင်းအပူချိန် ၂၈၀ စင်တီဂရိတ်အထိရှိသည်။ PTFE filter ခံစားချက်သည်အထူးပစ္စည်းဖြစ်ပြီး Alkali နှင့်အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ Anti-hydrolysis၊ တည်ငြိမ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ကျောက်မီးသွေးလောင်ကျွမ်းသောဘွိုင်လာ၊ စွန့်ပစ်သောအညစ်အကြေး၊ ကာဗွန်အနက်ရောင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အချို့သောမြင့်မားသောအပူချိန် (သို့) အချို့သောတောက်ပသောအရည်စစ်ထုတ်ခြင်း။
P84 filter ကိုအထည်
အလုပ်လုပ်အပူ: 240 ဒီဂရီ
အများဆုံးအပူချိန်: 260 ဒီဂရီ
500gsm P84 ဆေးထိုးအပ်သည်ရေနှင့် amp၊
Aramid filter ကိုအထည်
Pps filter ကိုအထည်
acrylic filter ကိုအထည်
ပင်မစာမျက်နှာ လွန်ခဲ့သော 12နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံး - စုစုပေါင်း 25 1 စာမျက်နှာနှုန်းလက်ရှိစာမျက်နှာ / စုစုပေါင်း220 မှတ်တမ်းတင်